Umhlahlandlela Wabathengisi Mayelana Nempahla Yobunikazi (IP) | Martech Zone
Umhlahlandlela Wabathengisi Mayelana Nempahla Yobunikazi (IP)
NgeSonto, Okthoba 11, 2020 NgoMgqibelo, Okthoba 10, 2020 ULarizza de Vera
Ukumaketha kungumsebenzi oqhubekayo. Noma ngabe uyinkampani yebhizinisi noma ibhizinisi elincane, ukumaketha kuyindlela ebalulekile yokugcina amabhizinisi eqhubeka nokusiza ukuqhubela amabhizinisi empumelelweni. Ngakho-ke kubalulekile ukuvikela nokugcina isithunzi somkhiqizo wakho ukuze kusungulwe okushelelayo umkhankaso wokumaketha webhizinisi lakho.
Kepha ngaphambi kokuza nomkhankaso wokukhangisa ngamasu, abathengisi kudingeka balibone ngokugcwele inani kanye nemikhawulo yomkhiqizo wabo. Abanye abantu bavame ukukunciphisa ukubaluleka kwe amalungelo obunikazi bempahla emikhankasweni yabo yokumaketha. Sazi kahle kamhlophe ukuthi amalungelo empahla yokusungula anganikeza isisekelo esihle kumkhiqizo noma kumkhiqizo, sixoxe ngezinzuzo zawo kanye nezinzuzo zawo.
Impahla Engqondo Inenzuzo Yakho Yokuncintisana
Amalungelo empahla enobuhlakani njengamalungelo obunikazi nelungelo lokuhweba avumela abathengisi ukuthi bethule kalula imikhiqizo yabo emphakathini.
Abamakethi sebenayo into eyodwa uma umkhiqizo wabo unelungelo lobunikazi. Njengoba ukuvikelwa kwelungelo lobunikazi kunika amabhizinisi ilungelo lokususa imikhiqizo efanayo emakethe, kwenza umsebenzi wabakhangisi ube nzima kakhulu. Bangamane bagxile ekutholeni i- isu lokumaketha elisebenzayo ngokuthi bazowethula kanjani umkhiqizo wabo emakethe, futhi bangakhathazeki ngokudlula noma ukushaya izimbangi zabo.
Ukuvikelwa kophawu lwentengiso, ngakolunye uhlangothi, kuyasekela futhi kunikeze isisekelo kumkhankaso wokumaketha. Inika amabhizinisi ilungelo elikhethekile ngaphezulu kwelogo, igama, isiqubulo, ukwakheka, njalonjalo. Uphawu lwentengiso luvikela isithunzi nesithombe somkhiqizo wakho ngokuvimbela abanye ekuxhaphazeni umaki wakho ngokuhweba. Umaki ungaba yisikhombi samakhasimende ukuze abone umkhiqizo wakho emakethe. Ngokuba nokuvikelwa kophawu lokuhweba endaweni yakho, ungaqiniseka ukuthi noma ngabe wenza muphi umkhankaso wokukhangisa noma isu, umphakathi uthola umyalezo ohambisana nekhwalithi yemikhiqizo yakho emakethe.
Njengesibonelo, umkhiqizi wokuqala webhethri akayona imbangela yebhethri elingisiwe eliqhume. Kodwa-ke, amakhasimende kungenzeka angakwazi ukubona ukuthi ibhethri liyalingiswa ngoba i-logo yakho iyabonakala kumkhiqizo. Lapho ikhasimende selibe nokuhlangenwe nakho okubi ngomkhiqizo, lizothinta isinqumo salo sokuthenga futhi lingaphendukela kweminye imikhiqizo ukuthola ezinye izindlela. Ngakho-ke ngaphandle kwesisho ukuthi ukuvikelwa kwe-patent kanye ne-trademark kungenye yezinto ezibalulekile emkhankasweni wokumaketha ophumelelayo.
Cwaninga Impahla Yengqondo Yabancintisana Nakho
Abakhangisi badinga ukwazi ukuthi amabhizinisi kufanele enze i-patent noma uphawu lwentengiso ngaphambi kokufaka isicelo se-patent noma uphawu lwentengiso e-United States Patent nase Trademark Office (USPTO). Ngalesi sigaba, abathengisi badinga ukubandakanyeka ngoba imiphumela yokufunwa kwelungelo lobunikazi noma uphawu lwentengiso ingaveza imininingwane ebalulekile engasetshenziselwa ukwakha uhlelo lokumaketha olusebenzayo. Imininingwane etholakala emphakathini mayelana nempahla enobuhlakani iyithuluzi elisebenzayo lokumaketha elizosetshenziswa ukukhomba abangahle bancintisane nabo.
Njengoba izicelo zobunikazi zivame ukufakwa ngamabhizinisi ezentengiselwano, ungasesha kalula amabhizinisi akhiqiza imikhiqizo ehlobene noma ngandlela thile efanayo kuwe. Ngokwenza njalo, uzokwazi ukwazi amandla nokulinganiselwa komkhiqizo wakho emakethe ngaphambi kokuthi uqale nokuwukhankasela.
Ukuba nokuqonda kokuthi ungasesha kanjani i-patent kubalulekile futhi ekumaketheni kwezebhizinisi kuya kwezebhizinisi futhi. Uzokwazi ukukhomba amabhizinisi noma izinkampani ezingazuza emikhiqizweni yakho. Isibonelo, uma usebhizinisini elikhiqiza i-microscope ye-elektroniki, uzokwazi ukucinga ezinye izinkampani ezihlobene naleyo nsimu yomsebenzi.
Imiphumela yosesho lobunikazi lobunikazi oluhambisana nombono wezomthetho ovela kummeli we-Patent yilokho kanye okusungulwe yilowo nalowo umqambi nomnikazi webhizinisi / usomabhizinisi ngaphambi kokuqhubekela phambili nokusunguliwe kwabo.
JD Houvener we Ama-Bold Patent
Vimbela Izinsolo Zokuphula umthetho ze-IP
Kubalulekile ukwazi ezinye zezisekelo zomthetho wempahla yengqondo ngaphambi kokumaketha umkhiqizo wakho ngezinjongo zokuhweba. Ngokwenza njalo, uzokwazi ukugwema izingqinamba zebhizinisi kanye namacala abizayo ahlobene nokuphulwa komthetho.
Ngokuya ngelungelo lobunikazi, abathengisi abaningi bebevele bazi izintambo nobukhulu bomthetho we-copyright uma kukhulunywa ngezinto zokumaketha. Usebenzisa izithombe, amavidiyo, ukulunywa umsindo, umculo, njll. Okuthi wena nje u-Google noma ukusesha kwenye injini yokusesha kungabeka ibhizinisi lakho engcupheni. Ngakho-ke, kufanele uqiniseke ukuthi imisebenzi yobuciko oyisebenzisela izinto zakho zokumaketha ayinayo i-copyright noma umdali / umbhali womsebenzi ukuvumela ukuthi uyisebenzisele izinjongo zokuthengisa. Ngale ndlela, ungagwema ukuphulwa kwamacala nezimali ezibizayo zamacala.
Ngokuqondene nelungelo lobunikazi noma uphawu lokuhweba, ukwazi ukubuka konke kwenqubo kungasiza kakhulu abathengisi ukuthi bagweme amacala okwephula umthetho. Njengoba inqubo yokufaka isicelo kanye neyokulungisa ingaba yinkimbinkimbi kancane, abanikazi bebhizinisi bavame ukuqasha uphawu lokuhweba noma ummeli welungelo lobunikazi ukubasiza ngokuhamba. Kulelo nothi, abathengisi abanjengawe kudingeka ubambe iqhaza futhi uqaphele le nqubo ukuze ukwazi ukuqhamuka nesu elingcono lokumaketha elingeke libeke ibhizinisi lakho engcupheni.
Bhuka i-Free IP Consultation
Tags: isibindi ipcopyrightukwephulwa kwamalungelo obunikaziokwenziwe ngenqondoamalungelo obunikazi bempahlaip umthethoUJD HouvenerUJD Houvenerumthethozomthethoi-patentukwephulwa kwelungelo lobunikaziuphawu lokuhweba
ULarizza de Vera
ULarizza ungumbhali ozimele ohlala ePhilippines. Ubhale ama-athikili ambalwa ephephandabeni i-Asian Journal, kanti usanda kusebenza nenkampani yabameli i-Intellectual Property e-Singapore futhi uhlela ukuphishekela ikusasa kwezomthetho we-IP.
IConga Contract Lifecycle Management: Thuthukisa Ukusebenza Ngokuthengisa Nge-Automation Workflow Automation